यी नै हुन इन्जिनियर जसलाइ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ज्यान लियो, – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/यी नै हुन इन्जिनियर जसलाइ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ज्यान लियो,
अर्का बेपत्ता भएका आयोजनामा कार्यरत अन्दाजी ५५ वर्षीय सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । २५वर्षको कलिलै उमेरमा दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाएका गोइतका आफन्त र साथी उनको निधनले मर्मात भएका छन् । उनी जिवनप्रति निकै आशावादी सोच राख्ने इन्जिनियर थिए । उनका साथीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निधन प्रति दुख ब्यक्त गरेका छन् ।
दुर्घटना पछि अहिले मेलम्ची खानेपानी आयो`जनाको सुरुङको परीक्ष`ण रोकिएको छ । आयोजनाको अम्बाथानस्थित फ्लसिङ (आवश्यक गर्दा पानी फाल्न बनाइएको) गेट एक्कासी खुलेर दुर्घटना भएपछि आयोजनाको परीक्षण स्वरुप पानी हाल्ने काम रोकिएको हो । सुरुङमा पठाएको सबै पानी बाहिर निकालिएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका–३ अम्बाथानस्थित आयोजना निर्माणस्थलमा बुधबार भएको दुर्घटनामा १० दिन पहिलेबाट सुरुङभित्र पठाइएको सबै पानी बाहिर निकालिएको बताइएको छ ।
सो दुर्घटनाका कारण घा`इते भएका कन्सल्ट्यान्ट दोर्जे पेम्बा र इञ्जिनीयर शेखर खनालको ग्वार्कोस्थित बी एण्ड बी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दुर्घटनामा सवारी चालक राधाकृष्ण थापामगरको खोजी भइरहेको छ ।
देशमा अ`न्धकार ल्याउनेहरु धेरैछन्, उज्यालो ल्याउनेलाई सम्मान गरौं : हरिवंश आचार्य
काँग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने- ‘एम. सी. सी सम्झौता मैले गरेको हुँ, यो देशको हितमा छ’
किस्ता तिर्न ताकेता पछि १५५ सार्वजनिक गाडीले चाबी बैंक लाई बुझाए !!